Nepali Rajneeti | एमसीसी अब यो मिति भित्र पास हुनुपर्ने ! प्रचण्ड भन्छन हामी एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने पक्षमा छैनाैँ
मंग्सिर ४, २०७८ शनिबार ४८ पटक हेरिएको
काठमाण्डाै – अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । आज शुक्रवार अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रचण्डसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो ।
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘राम्रो वातावरणमा सौहार्दपूर्ण र खुला छलफल भयो, म छलफलबाट पूरै सन्तुष्ट भएको छु । नेपालको समग्र विकास प्रक्रिया, नेपालको विकासको सम्भावना बढी कुन क्षेत्रमा छ भन्नेबारेमा कुराकानी भयो । उहाँले यहाँको क्लिन इनर्जीको बारेमा थोरै कुरा राख्नुभयो । एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टकाे बारेमा केही कुरा गर्नुभयो ।
मैले नेपालमा एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रिकाे आवश्यक्ता छ, युवाहरूलाई रोजगारी हुन्छ, एग्रोबेस्ट इन्डस्ट्री नै राम्रो हुन्छ भने । एमसीसीको बारेमा मैले प्रष्टसँग भने– हामी एमसीसी फिर्ता जाओस् भन्ने पक्षमा बिलकुल छैनौँ ।
किनभने त्यत्रो पैसा नेपालमा पूर्वाधारका लागि आवश्यक छ, तपाईँहरू पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी लिन तयार छौँ । यहाँ केही अलमल छ, पहिला ओर्जिनल डकुमेन्ट जस्तो थियो, अहिले छैन, त्यसले अलमल छ ।
अल पार्टी मिटिङमा हामी छलफल गर्छाैँ, हामी डिसेम्बर १४ अघि एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ ।’एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालपछि सहायक विदेश मन्त्री लुले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग पनि शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ । यो खबर उज्यालो अनलाइनमा छ ।